About what we gave 1. Standard Service Receive goods from Shanghai, ရှန်ကျန်း, Guangzhou and other port city warehouses in China, and send the seller's goods to the Amazon warehouse designated by the United States, United Kingdom, Canada, Australia, Japan, Germany and other countries by sea and air transportation! 2.…
The warehousing service process we give to customers Receipt, စာရင်း, သိုလှောင်မှု, delivery The one-stop service experience helps each customer save shipping costs to the maximum. ကျနော်တို့ထက်ပိုရှိသည် 2,000 ဂိုဒေါင်၏စတုရန်းမီတာ, ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများခွဲဝေ. စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်. When you need to…